राजेन्द्र महतोको दिल्ली उपचार सकियो
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं । दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराइरहेका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो डिस्चार्ज भएका छन् । विराटनगरको जोगवनी नाकामा धर्नाका क्रममा भएको झडपमा घाइते भएका महतो गएको शुक्रबार मात्रै धरानबाट उपचारका लागि सिधै दिल्ली गएका थिए । महतो केही दिन दिल्लीमै रहेर आराम गर्ने छन् । आफन्तहरुले सरकारले हत्या प्रयास गरेपनि उपचारपछि महतोको स्वास्थ्य पूर्ववत हुने क्रममा रहेको बताएका छन् । नियमित औषधी सेवन गर्ने र एक हप्ता पछि परिक्षणक ... बाँकी अंश»
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं। संविधानका कुरा बुझाउन र पार्टीको सांगठनिक गतिविधीका बारेमा स्थानिय नेता कार्यकर्ताहरुसँगको अन्तरक्रियाका लागि काँग्रेस नेता गगन थापा अर्का नेता प्रदिप पौडेलसँग मध्य तराईका भ्रमणमा निस्केका छन्। तराई मधेश आन्दोलित भइरहँदा तराई मधेशका समस्या र तिनका समाधानमा केन्द्रमा भइरहेका पहलहरुमा पार्टीका स्थानिय कार्यकर्ताहरु र सर्वसाधारणको धारणा बुझ्न काँग्रेस नेता गगन थापा पौडेलसँगै मध्य तराइका लागि निस्किएका हुन। बारा, रौतहट, सर ... बाँकी अंश»
देउवाको भोजमा सुशीलको भीड
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं । कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको दिवाभोज कार्यक्रममा संस्थापन पक्षकै नेताहरुको भीड लागेको छ । आसन्न १३औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि उमेद्वारी दिने तयारीमा रहेका बरिष्ठ नेता देउवाले आफ्ना सहयोगीका लागि आयोजना गरेको दिवाभोजमा संस्थापन पक्षकै पदाधिकारी सहित प्रभावशाली नेताहरु बढी देखिए । राजधानीको शान्तिनगरस्थित आनन्द पार्टी भेन्यूमा भएको दिवा भोजमा संस्थापन पक्षकै मानिने महामन्त्री कृष्णप्रसाद ... बाँकी अंश»
ओलीको फुस्रो अनुहारप्रति शंका छ.............
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका बरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी फेरी आठौं पटक अनसन बस्ने तयारीमा छन् । केसीले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा नीति बनाउन पहल थाल्न सरकारलाई बुधबार सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । सरकारले कुनै प्रक्रिया नथाले केसीले विहिबारबाट अनसन थाल्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । सरकारले केही दिन अघि मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतका स्वास्थ्य संस्थानलाई पुनः चिकित्सा विज्ञान पढाउन स्वीकृति द ... बाँकी अंश»
स्कुल बस र माइक्रो ठोक्किदा माइक्रो सवार ५ को मृत्यु
२०७२ पौष २२ बुधबार, दाङ । दाङको तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डको सौडीकुलामा भएको सवारी दुर्घटनामा परि बुधवार बिहान ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना यात्रु घाइते भएका छन् । घोराहीबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको पद्यमोदय पब्लिक नमुना स्कूलको रा १ क १९१ नम्वरको बस र तुलसीपुरबाट घोराहीतर्फ जाँदै गरेको रा १ ज ३७२ नम्वरको माइक्रो एक आपसमा ठोक्किदा उक्त दुर्घटना भएको हो । ... बाँकी अंश»
शैयाका श्रीमानलाई सभामुखले आज भेट्ने
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदकी सभामुख ओनसरी घर्ती र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज (बुधवार) थाईल्याड जादै छन् । सभामुख घर्तीका पति तथा एमाओवादीका सचिव बर्षमान पुनलाई भेट्न उनीहरु थाईल्याण्ड जान लागेका हुन् । उनीहरु विहान ११.३० बजे नेपाल एयरलाईन्सको जाहजबाट थाईल्याण्ड जाने तयारीमा रहेको सभामुख घर्तीको सचिवालयले जनाएको छ । थाईल्याण्डको बैङकक स्थीत समितिभेज अस्पतालमा एमाओवादी नेता पुनको उपचार भईरहेको छ । नेपालमै लामो समय उपचार गराउदा ... बाँकी अंश»
केपी अध्यक्ष र शुसिल उपाध्यक्ष भएको राष्ट्रिय परामर्श परिषद गठन
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौँ। सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा परामर्श परिषद् गठन गरेको छ । परिषद्को उपाध्यक्षमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला रहनुभएको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत हुने मन्त्रीहरुतर्फ उपप्रधानमन ... बाँकी अंश»
तराई मधेश गएका गगनलाई प्रश्नै प्रश्न
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं। तराई मधेश आन्दोलित भइरहँदा तराई मधेशका समस्या र तिनका समाधानमा केन्द्रमा भइरहेका पहलहरुमा पार्टीका स्थानिय कार्यकर्ताहरु र सर्वसाधारणको धारणा बुझ्न मध्य तराईका भ्रमणमा निस्केका काँग्रेस नेता गगन थापालाई प्रश्न र सुझावको ओइरो लागेको छ। बाराबाट शुरु गरेर मंगलवार रौतहटका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि भएका थापाले कैयन नेता कार्यकर्ताको धारिलो प्रश्न र पार्टीलाई अग्रगमनतर्फ लैजान सुझाव समेत पाए। मधेशी समुदाय र पहाडी समुदायका बीचमा संवा ... बाँकी अंश»
भगौडा देखि तर्सिदै दाहाल, मधेस विखण्डन र नयाँ शक्तिको ठूलो भय
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको शक्ति केन्द्रमा रहेका एकिकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सप्तरी पुगेर मधेस आन्दोलन भगौडा र विखण्डनकारी दलालहरुको पोल्टामा परेको भनेपछी तरंग फैलिएको छ । दाहाल सत्ताधारी मात्र नभई ठूला राजनीतिक शक्तिको कमाण्डर भएकैले समेत उनको अभिव्यक्तिले तरंग फैलिएको हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक समेत रहेका दाहालले सरकार र विपक्षीलाई साईजमा ल्याउन विभिन्न रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वकै ... बाँकी अंश»
अनेरास्ववीयू क्रान्तिकारीले शैक्षिक माफीया चिनाउने
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौ। अनेरास्ववीयू क्रान्तिकारी (विप्लबसमूह)ले शैक्षिक माफीया र दलालहरुको फोटोसहितको होर्डिङ्ग बोर्ड सार्वजनिक स्थलमा राख्ने भएको छ । सो संगठनले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुको कुकृत्यको फेहरिस्तसहितको होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने घोषणा गरेको हो । ... बाँकी अंश»
कार्यदलका लागि मोर्चाबाट तीन सदस्य, महन्थले छेडे दिल्ली देखि वीरगन्जसम्मको झमेला
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रमुख तीनसंग वार्ता गर्न प्रस्तावित कार्यदलका लागि तीन सदस्य पठाउने भएको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यालयमा भएको छलफलले मोर्चाको ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न तीन सदस्य पठाउने तय गरेको हो । यसलाई बैठक भन्न मिल्दैन । माइनट नभएकाले बैठक होइन सल्लाह गरेका हौं । महन्थ ठाकुरले दिल्ली देखि विरगन्ज सम्म कुराकानी गरेपछी तीन सदस्यको टुंगो लागेको हो । बैठकबाट निस्कनेवित्तिकै सद्भावना पार ... बाँकी अंश»
तरुण दलका उमेदवार पार्टी तिर सर्दै
२०७२ पौष २१ मंगलबार, काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन लामो समय सम्म पनि नभएपछि तरुण नेताहरु पार्टीकै महाधिवेशनमा प्रतिश्पर्धा गर्ने भएका छन् । तरुण दलको महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाएकाले दलको नेतृत्व हाँक्न खोज्ने नेताहरु नै पार्टी तिर खुट्टा उचाल्न थालेका हुन् । हरेक तिन तिन बर्षमा महाधिवेशन हुनु पर्नेमा २०६४ साल देखि महाधिवेशन हुन नसकेपछि तरुण दलका नेताहरु पार्टी तिरै लाग्नु पर्ने वाध्यता आईपरेको तरुण दलको अध्यक् ... बाँकी अंश»
काँग्रेस नेता महेन्द्र शर्मा भन्छन "महाधिवेशनमा पैसाको चलखेल व्यापक हुनेवाला छ"
२०७२ पौष २० सोमबार, काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र शर्माले नेपाली काँग्रेसको आसन्न १३ औं महाधिवेशनलाई पैसाको बलमा प्रभावित पार्न चलखेल हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। हाम्राकुरा डटकमसँग कुरा गर्दै शर्माले पैसाको चलखेल धेरै हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै पैसाको प्रभावमा केन्द्रिय समितिमा पुग्न लालायित हुनेहरुले नेतृत्व तहलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने बताएका हुन। शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारका निवर्तमान मन्त्रीहरुको नाम नलिइकनै ... बाँकी अंश»
अज्ञात समूहको गोली लागेका प्रहरी सहायक निरिक्षक सुब्बाको मृत्यु
२०७२ पौष २० सोमबार, सप्तरी । सप्तरीको वननियास्थित प्रहरी चौकीमा अज्ञात समूहले गरेको आक्रमणमा गोली लागेका प्रहरी सहायक निरिक्षक रमेश सुब्बाको मृत्यु भएको छ । अज्ञात बन्दुकधारीले प्रहार गरेको गोली लागेर प्रहरी सहायक निरिक्षक सुब्बा गम्भीर घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो । सुब्बाको छाति र पीठ्यूमा गोली लागेको थियो । आक्रमणकारीको अवस्था अझै अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ । भारतीय सीमाबाट आठ किलोमिटर मात्र उत्तरमा वननियामा ... बाँकी अंश»
कार्यदलको प्रस्तावपछी मोर्चामा लफडा, सल्लाह गरेर......... :रक्षामन्त्री
२०७२ पौष २० सोमबार, काठमाडौं । तीनदल, सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच आइतबार भएको वार्ता निष्कर्षविहिन भएपछि मोर्चामा अन्योल सिर्जना भएको छ । सरकारले वार्तामा प्रस्ताव गरेको कार्यदलमा कति सदस्य पठाउने भन्नेमा मोर्चाका घटकहरुले फरक–फरक मत राखेका छन् । सरकारले एक जना सदस्यको नाम राख्न भनेपछी वार्तामा सहभागि मोर्चानेताहरुले बालुवाटारमा सल्लाह गरेर आउने बताएका थिए । तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं वार्ता टोली सदस्य रामनरेश रायले ... बाँकी अंश»
कठै बालबालिका, कठै बालगृह
२०७२ पौष २० सोमबार, सञ्जिव दाहाल, काठमाडौं। कसलार्ई मन हुन्छ र सानै उमेरमा आफ्नो आमाको काखबाट छुट्नलार्ई ! दैवदशा लागेपछि कसको के लाग्छ र न आमाको काख न बाबाको साथ। नक्सालस्थित शिक्षाका लागि खाद्यान्नको कार्यालयमा पुग्दा दैवको यस्तै लीला देखिन्छ। विभिन्न ठाउँका अनाथ बालबालिका राखिदै आएको बालगृहमा विनाशकारी भूकम्पले अभिभावक गुमाएर टुहुरा भएका बालबालिकाहरू पनि थपिएका छन्। त्यहाँ रहेका हरेक बालबालिका आफैमा एउटा कथा छन् र त्यसका मूल पात्र पनि उनीहरु आफै हुन्। नक्सालक ... बाँकी अंश»
राजेन्द्र महतोको उपचारमा सात डाक्टर, धरानबाट दिल्ली किन ?
२०७२ पौष २० सोमबार, काठमाडौं । तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मार्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ । आन्दोलन रोक्ने र मधेसको सम्मस्या समाधानमा अर्थपूर्ण वार्ता हुन नसकिरहेका बेला महतोको पार्टीले छुट्टै आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ । विराटनगरको जोगवनी नाकामा धर्नाका क्रममा घाइते भएका महतोको दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । रक्तचाप र सुगर कन्ट्रोल भएको छ । पूर्णरुपमा भन ... बाँकी अंश»
यसरी कहिलेसम्म चल्छ : खोई हाम्रो अधिकार?
२०७२ पौष २० सोमबार, काठमाण्डौं। बालवालिकाको नाममा बर्षनै करोडौ खर्च हुन्छ। बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाको पनि कम छैन। तर, उपत्यकामै बालबालिकाको अवस्था यस्तो छ। अधिकार प्राप्तीका लागि आन्दोलननै गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली मानसिकता कहिले अन्त्य हुन्छ ? कहिले पाउछन् यिनिहरुले अधिकार ? के बाल श्रम अन्त्य होला त ? नाजवाफ राज्यलाई प्रश्न ? ... बाँकी अंश»
भारतमा गएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो, सय बढी घाइते
२०७२ पौष २० सोमबार, संजिब दाहाल,काठमाडौं । भारतको पूर्वोउत्तर मणिपुर इम्फालकेा मैनपुरलाई केन्द्रविन्द्र बनाएर गएको भूकम्प परी ८ को मृत्यू भएको छ, भने एक सय बढी घाइते भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकन जियोलोजिकल सर्भे युएसजीएसका अनुसार बिहान ४ बजेर ५१ मिनेटमा मणिपुरबाट २९ किलोमिटर पश्चिम केन्द्रविन्द्र भएर ६.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो । भूकम्पले घरहरु भत्किएका छन्। भूकम्पपछि अस्पतालबाट बिरामीहरुलाई बाहिर निकालिएको थियो भने मानिसहरु घ ... बाँकी अंश»
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तीनजनामाथि राज्यविरुद्ध अपराध मुद्दा
२०७२ पौष २० सोमबार, लहान। डा सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनमा आबद्ध तीनजना नेता कार्यकर्तामाथि सिरहा प्रहरीले राज्यविरुद्ध अपराध तथा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । सिरहाको लहान नगरपालिकाबाट शनिबार पक्राउ परेका गठबन्धनका तीनजनामाथि इलाका प्रहरी कार्यालय, लहानले राज्यविरुद्ध अपराध तथा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाई आवश्यक कारबाहीका लागि विशेष अदालत काठमाडौँ पठाइएको जिप्रका, सिरहाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले जानक ... बाँकी अंश»